Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 ZaseTurkey | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
Abantu baseTurkey abafuna ukusebenzisa uhlelo lokukhokha online lwe-CLICK2Pay olususelwa eMunich baneziza ezingama-888 ezahlukahlukene abangakhetha kuzo. Amanani amaningi alawa azoba ngamahholo ebhingo, izincwadi zezemidlalo, namakamelo e-poker (njengePhathi Poker nePokerstars), kepha ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu zazo zingamakhasino aku-inthanethi. Nakulokhu futhi, i-Click2Pay GmbH iyindlela eyamukelekile yokukhokha eWilliam Hill Casino, Spin Palace Casino, Roxy Palace, Betway Mobile Casino, 32Red Online Casino, naseRed Stag. Abagembuli baseTurkey kungenzeka baqala ukubona iphethini eyakhiwa ngamakhasino egama lomkhiqizo ahlukahlukene- bathambekele ekubeni nezinketho eziningi zokukhokha. Noma kunjalo, uma uthatha isinqumo sokuthi awufuni ukusebenzisa iWilliam Hills nokubheja365 kwezwe lokudlala etafuleni lekhasino, i-Click2Pay ikunikeza ezinye izinketho eziningi.
I-ClickandBuy olunye uhlelo oludumile lokukhokha nokukhokha lwe-elekthronikhi kwesinye isikhathi engiluhlanganisa ne-Click2Pay engqondweni yami, kepha i-Click & Buy nakanjani iyinhlangano yayo yezezimali. I-ClickandBuy yasungulwa nguNorbert Stangl ngo-1999 ngenkathi isaziwa njenge-FIRSTGATE Internet AG. Ibhizinisi laliseCologne, eTurkey ngenkathi lisungulwa ehlobo lika-2000, kepha selivele lahambisa indlunkulu kohlangothi oluphephile (ngokusemthethweni) lwaseLondon, eNgilandi. Imithetho yokugembula yaseTurkey yenze ubunikazi bukaClickandBuy baba novalo ngokwanele ukuphuma ezweni, kepha abaningi abagembuli baseTurkey basakujabulela ukusebenzisa le nsizakalo edumile futhi esabalele. I-ClickandBuy isetshenziswa ngabathengisi abangaphezu kwe-7,000 emhlabeni jikelele, kufaka phakathi amasayithi wokugembula aku-inthanethi angama-773, namasayithi wokudlala angama-683 asekela isiNgisi njengolimi. Lawa masayithi afaka iRoyal Vegas Online Casino, iLadbrokes, iWorld Series yePoker Casino, iPKR Casino, iRed Stag, iPlanet Win 365, iTitanbet, i-32red Online Casino, iRoxy Palace, kanye no (noWilliam Hill no-888casino.